စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေက အသဲယားစရာကောင်းနေပြီး မိမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ မမသင်ဇာရဲ့ အလန်း ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေက အသဲယားစရာကောင်းနေပြီး မိမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ မမသင်ဇာရဲ့ အလန်း ဗီဒီယိုလေး
သင်ဇာလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြပြီး ဆက်စီ ကျလွန်း တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကြောင့် မြင်သူတိုင်းကို ရင်ဖိုစေအောင် ဖမ်းစား တတ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ် တော် မင်းသမီးချာ လေး က တော့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် … . သရုပ်ဆောင် ကောင်းပြီး ဇာတ်ကားတွေ လည်း များစွာ ရိုက်ကူးထား တဲ့ သင်ဇာလေး က တော့ အားပေး ချစ်ခင်ကြ တဲ့ ပရိသတ် အခိုင် အမာနဲ့ အောင်မြင် နေသူလေး လည်း ဖြစ်ကာ အချိုးအစား ကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှနဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်တွေကြောင့် လည်း ပရိသတ်တွေ ကြား ရေပန်းစား နေတာပါ … .
ပုရိသ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု တွေကို အများဆုံး ရရှိထားပြီး မြင်သူတိုင်းရဲ့ အမြင်အာရုံတွေ ကို ဖမ်းစား ထားနိုင်တဲ့ သင်ဇာ လေးဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင် နေကာ ကြော်ငြာ တွေလည်း ရိုက်ကူး ပေးနေတာ တွေ့မြင် ရပါတယ် နော် … . သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု လေးတွေ နဲ့ ပရိသတ် တွေကို အချစ်ပိုစေ တဲ့ သင်ဇာလေး တစ်ယောက် အခု တစ်ခါမှာ လည်း ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က ညို့အားပြင်း ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိလွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကိုလည်း ဝေမျှ လာပါတယ် နော် … .
ဖွံ့ထွားတဲ့ ညို့အားပြင်း အလှတွေက ရင်ဖိုစရာ ကောင်းပြီး စွဲမက် လှိုက်မော စေတဲ့ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က သင်ဇာရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယို ဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းတွေခြွေယူ လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် … . ဒီကနေ့လေး မှာတော့ ချစ်ရ တဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော်လေး မော်လ်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကိုလည်း အားလုံး အတွက် ဝေမျှ ပေးလိုက် တာမို့ သဘောကျ နေကြလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်နော် … .
crd : Thin Zar Wint Kyaw ’ s IG Acc
သင္ဇာလို႔ အားလုံးက ခ်စ္စနိုး ေခၚၾကၿပီး ဆက္စီ က်လြန္း တဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြေၾကာင့္ ျမင္သူတိုင္းကို ရင္ဖိုေစေအာင္ ဖမ္းစား တတ္တဲ့ ျပည္သူ႔အခ်စ္ ေတာ္ မင္းသမီးခ်ာ ေလး က ေတာ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … . သ႐ုပ္ေဆာင္ ေကာင္းၿပီး ဇာတ္ကားေတြ လည္း မ်ားစြာ ရိုက္ကူးထား တဲ့ သင္ဇာေလး က ေတာ့ အားေပး ခ်စ္ခင္ၾက တဲ့ ပရိသတ္ အခိုင္ အမာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ေနသူေလး လည္း ျဖစ္ကာ အခ်ိဳးအစား က်လြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွနဲ႔ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ေတြေၾကာင့္ လည္း ပရိသတ္ေတြ ၾကား ေရပန္းစား ေနတာပါ … .
ပုရိသ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ေတြကို အမ်ားဆုံး ရရွိထားၿပီး ျမင္သူတိုင္းရဲ့ အျမင္အာ႐ုံေတြ ကို ဖမ္းစား ထားနိုင္တဲ့ သင္ဇာ ေလးဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနကာ ေၾကာ္ျငာ ေတြလည္း ရိုက္ကူး ေပးေနတာ ေတြ႕ျမင္ ရပါတယ္ ေနာ္ … . သူမရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ေလးေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ ေတြကို အခ်စ္ပိုေစ တဲ့ သင္ဇာေလး တစ္ေယာက္ အခု တစ္ခါမွာ လည္း ေၾကာ္ျငာ ရိုက္ကြင္း ေပၚက ညိဳ႕အားျပင္း ဆြဲေဆာင္မႈေတြ ရွိလြန္းတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကိုလည္း ေဝမၽွ လာပါတယ္ ေနာ္ … .
ဖြံ့ထြားတဲ့ ညိဳ႕အားျပင္း အလွေတြက ရင္ဖိုစရာ ေကာင္းၿပီး စြဲမက္ လွိုက္ေမာ ေစတဲ့ ရိုက္ကြင္း ေပၚက သင္ဇာရဲ့ အၾကမ္းစား ဗီဒီယို ျဖစ္ၿပီး ပုရိသေတြရဲ့ အသည္းေတြေႁခြယူ လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … . ဒီကေန႔ေလး မွာေတာ့ ခ်စ္ရ တဲ့ ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ေလး ေမာ္လ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ရဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလးကိုလည္း အားလုံး အတြက္ ေဝမၽွ ေပးလိုက္ တာမို႔ သေဘာက် ေနၾကလိမ့္ မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ ပါတယ္ေနာ္ … .
Previous post သတို့သမီးဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပျော်မြူးနေတာလေးကို ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ချပြရင်း သူမပရိတ်သတ်တွေကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း